Izindaba - Ukuhanjiswa kweziqukathi kuya eYurophu
Ukuhamba kweziqukathi kuya eYurophu
Izindaba ezimnandi! Inkampani yethu ithumele amakhabethe ayisithupha eYurophu kuleli sonto.
ISuzhou Yuanda Commercial Equipment Co, Ltd. ingumkhiqizi ozinikele ezintweni ezisezingeni eliphezulu, ezinjengamashalofu ezitolo ezinkulu, izinqola, amabhasikidi okuthenga, ama-racks yemifino, amarejista wemali, njll. Imikhiqizo ithunyelwa ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, kanti amashalofu aseYuanda ahlala kuma-80% imakethe yaseningizimu yeYurophu.
Ngokukhula okuzinzile nokuzinzile, u-Yuanda utshale imali ukwakha ifektri entsha ngo-2010, nokuqinisa ekutshalweni kwemali kuzinto zokukhiqiza, ukwenza inqubo yokushaya isibhakela okungalawulwa kahle, ukuzishisela okuzenzakalelayo, ukusika okuzenzakalelayo nokunamathisela kwe-static spray nokunye okunye okuzenzakalelayo imishini, ihlose ukuqedela konke ukukhiqizwa okuzenzakalelayo ukuze kuthuthukiswe ngokuyisisekelo amandla wokukhiqiza. Inqubo yokukhiqiza amashalofu imi kanje:
1. Ukugingqika. Kunezinhlobo eziningi zamatshe okugaya. Kunemishini esezingeni eliphakeme ehlakaniphile efana naleyo esetshenziswa yishelufu lezinkomo zempi, futhi kunemishini yakudala yakudala esetshenziswa emafemini amancane noma kumasifundisane. Umsebenzi wawo ikakhulukazi ukugoqa ububanzi obuthile bensimbi yensimbi ngokusebenzisa isikhunta bube sesimweni esifiselekayo sobude obuthile besigaba esifanayo, njengamakholomu eshalofu, imishayo yamashalofu, njll. Lesi futhi isinyathelo esibaluleke kakhulu ekukhiqizeni ishalofu.
2. Ukuma nokubeka isibhakela. Ngokwezidingo zangempela, impahla egoqiwe ishaywa emigodini edingekayo lapho kunesidingo, njengezimbobo eziguquliwe eziyisishiyagalombili noma izimbobo zedayimane zama-racks anomthwalo osindayo, kanye nezimbobo eziyindilinga ku-brace cross. Ukubekwa kwesibhakela kufanele kwenziwe ngokuhambisana nemidwebo yomklamo, ukuze kuqinisekiswe inhlanganisela engaguquguquki nephumelelayo yayo yonke iphrojekthi yeshalofu.
3. Ukugoba (ipuleti lensimbi). Uma ishalofu linamapuleti ensimbi, khona-ke amapuleti ensimbi adinga ukugoba. Okunye ukulungisa kahle amapuleti ensimbi emishayweni, kanti okunye ukukhulisa amandla athwala umthwalo wamapuleti ensimbi.
4. Ukushisela nokupholisha. Izingxenye ezicutshungulwayo zizodinga ukuhlanganiswa ndawonye ukuze kufakwe insimbi, njengekholomu nocezu lwenyawo lweshalofu, ugongolo kanye nokubamba. Lokhu kudinga ukufakwa ngezinsimbi ngokuya ngamazinga afanele kazwelonke, futhi amandla okushisela nokuguqulwa kwamandla kufanele kuqinisekiswe. Ngemuva kokuthi insimbi isiqediwe, amalunga we-solder kufanele apholishwe ukukhulisa ubuhle beshelufu nokwenza ngcono ukuphepha kweshalofu.
5. Ukwelashwa komhlaba. Ukwelashwa kwendawo eshalofini kufaka phakathi ukukhethwa kanye ne-phosphating, ukufafaza kwe-electrostatic, ukwelashwa okushisa njalo, njll.